घर मानिसको पहिलो पाठशाला हो । बालबालिकाको सबैभन्दा ठूलो मित्र तथा गुरु आमा हुन् भन्ने गरिन्छ । नेपोलियन बोनापार्टले मलाइ शिक्षित आमा देउ मैले तिमीलाई असल नागरिक दिन्छु भनेका छन् । वुद्घले मन नै...
के छ हालखबर ? के हुनु, उस्तै त हो, खाना खायो, सुत्यो । उठ्यो, फेरी खायो अनि फेरी सुत्यो । बाहिर निस्कन मिल्दैन । पाहुना जान पाईएन । कोहि आफन्त पनि आउन पाएनन् । भेटघाट सबै फोनमा सिमित भएको छ । टिभि पनि...
एउटा घटनावाट शुरु गरौं । सन् २०१६ मा स्वीजरल्याण्डको एक शहरमा त्यहाँका राष्ट्रपतिबाट समुद्घाटित पेशागत तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीम सम्वन्धि एक अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममा एउटी एक्काइस वर्षीय युवतिल...
शिक्षकको ठाउँमा अभिभावक उभिनु पर्ने समय
चीनको वुहानबाट शुरु भई विश्वव्यापी माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिम न्यूनिनकरण गर्न भन्दै गरिएको लकडाउनका कारण देश नै ठप्प छ । त्यसो त संसारका प्राय सबै देशको हालत उस्तै छ, कोरो...
शिर्षकमा उल्लेख वाक्य अधिकांश अभिभावकको पहिलो प्रश्न हो ! कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) को महामारी सुरु भएयता विश्वका थुप्रै मुलुकसँगै नेपाल पनि लकडाउनमा गयो । सुरुका केही साता सहजै लकडाउनमा रहे पनि अब...
आदरणीय सर नमस्कार । विषयः होमवर्क सम्बन्धमा । आराम छु । तपाईं पनि पक्कै आरामै हु...
सुनौलो अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने मौका
अहिले सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड - १९) को कारणले आक्रान्त भएको छ । सबैजसो देशहरूमा मानिसहरूले बिषम परिस्थितीमा जसोतसो आफ्नो गुजारा गरिरहेका छन् । यस महामारिको अवस्थामा सबैलाई आ आफ्नै समस्या...
नाटक घरमा पहिलो पटक
आठ नौ वर्षको हुँदा हलमा फिल्म हेरेको थिएँ । त्यस पछि अहिले ९ कक्षा पढ्दा सम्म हलमा पुगेकी छैन । नाटक घर त झन् कस्तो होला भन्ने लागिरहेको थियो । नाटक घरमा फिल्म हलमा जस्तै सेतो पर्दा हुन्छ कि हुन्न होल...
देवीराम आचार्य शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत कार्यरत रहनु उनको पेशागत परिचय भए पनि समग्र शिक्षाको अध्ययन र अनुसन्धानमा उनको सक्रीय सहभागिता छ । उनले गरेका खोज, अनुसन्धान र देखे, भोगेका विषयमा केन्द्रित आल...
प्रिय विद्यार्थी ! सफलताको कामना केही दिन देखि तिमीसँग भलाकुसारी गर्न मन लागिरहेको थियो । त्यो समय आज जुराएको छु । तिमीसँग अनि तिमी जस्तै विद्यार्थीसँग निकट बनेर तिमिहरुको मुहारमा खुसी छाउँदा आफू...
कलिलो मस्तिष्कमा असफलताको 'ट्याग' !
नयाँ शैक्षिक सत्र सँगै अभिभावकलाई मात्रै हैन साना साना नानीहरुलाई समेत ठूलो तनावले घेर्छ । अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानको विद्यालय शिक्षा शुरु गर्ने विद्यालय छनौटको तनाव हुन्छ भने, ती साना नानीहरु आमावावु...
आदरणीय शिक्षा मन्त्री ज्यू नमस्कार सञ्चो विसञ्चो कसरी सोधुँ ! हामी दुर्गमका अधिकाँश मान्छे अनुमान गछौं शहरका मान्छे त सँधै सुखि खुसी र सम्पन्न होलान् ! त्यसमा पनि काठमाडौंको सिंहदरवारमा बस्न...
शिक्षण संस्था फष्टाउनको लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीच सुमधुर सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ । अभिभावकको रेखदेख र सहयोग विद्यालय तहमा त झन् अपरिहार्य नै हुन्छ । अहिले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्या...
नेपाली समाजमा पुरानो लोकोक्ति छ – बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन ! समय बदलिएसँगै उक्त लोकोक्तिको प्रयोग विज्ञापनका रुपमा स्थापित भएको छ । यो प्रसंग हो निजी विद्यालयहरुले गर...
'आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क सँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने छ । सँगै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ' - नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर...